Maxkamada sare oo go aan ka gaarayso in Yaasmiin in lagu celiyo Hungary iyo inkale. - NorSom News
Maxkamada sare oo go aan ka gaarayso in Yaasmiin in lagu celiyo Hungary iyo inkale.
Maxkamada sare ee Norwey ayaa isbuucan go aan ka gaarayso in Yaasmiin oo ah gabar soomaali ah oo sanadkii 2009 timid wadanka lagu celiyo Hungary oo ay faro ku leedahay iyo in codsigeeda-magangalyo looga shaqeeyo Norwey. Yaasmiin ayaa sanadkii 2010 la siiyay diidmo, maadaama ay sharci ku leedahay wadanka Hungary, laakiin waxaa la siiyay ogolaansho ah inay Norwey deganaato lix bilood maadaama ay dacweysey ninkii Yurub soo galiyay kuna qasbay inay noqoto haweenka jirkooda ka ganacsada!!.
Tv-ga NRK , barnaamijkiisa Brennpunkt ayaa documentary calool xumo ah ka diyaariyay nolosha yaasmiin iyo sida ay Norwey kusoo gashay kadib 15 sano oo ay niman ku qasbeen inay jirkeeda ka ganacsato. inta uu documentryga uu socda waxaa hadba la arkayaa Yaasmiin oo dhacayso marka ay soo xasuusato dhibaatada lasoo mariyay iyo silicii ay ku nooleyd mudada dheer. Waxaa kaloo jirkeeda ka muuqdo nabaro iyo dhaawacyo kasoo gaaray noloshaas ay ku jirtay. Yaasmiin ayaa dacweysay nimankii ku ciyaaray nolosheeda, laakiin booliska ayaa laalay dacwadeeda.
Halkan ka daawo documentariga laga diyaariyay sadex gabdhood oo ay yaasmiin kamid tahay( Brennpunkt: fortell eller forsvinn)
Yaasmiin ayaa dhaawac maskaxiyan ah wuxuu kasoo gaaray sanadadii badnaa ee ku noolayd noloshaas, ilaa afar dhaktar oo kala duwan ayaana cadeeyay inay tahay qof maskixiyan xanuunsanaya, una baahan daryeel bini-aadanimo. laakiin UDI ayaa ku adkeysatay in ay kiiska yaasmiin qaabili karin, maadaama ay faro iyo sharci ku leedahay wadan kale. Yaasmiin ayaa racfaan ka qaadatay go-aankaas, ugu danbeytiina kiiska ayaa hada gacanta ugu jiro maxkamada sare, go aana ka gaarayso isbuucan.
Dowlada Hungary oo markii hore faro ka qaaday Yaasmiin ayaa cadeeyay in ay waxba u qabin karin, hadii lagu soo celiyo wadankooda.
Wenche Hovland oo ah gudoomiyaha xarunta dadka dhibaataysan(krise-senter) oo kutaal Fløro ayaa sheegtay inay tahay wax aan lala yaabo oo aan la aqbali karin in Yaasmiin oo ah qof maskaxiyan iyo jir ahaanba xanuunsan in wadanka laga bixiyo.
Hadaan nahay bahda Norsomnews, markaan daawanay programka caloolxumada ah, waxaan gabadhan u rajeyneynaa in loo ogolaado inay ku noolaato Norwey. Wixii xaaladeeda kusoo kordhana kala soco halkan
warkan oo norske ah halkan ka akhri(les saken på norsk her)
Previous articleMani Hussaini: Sylvi Listhaug halaga ceyriyo dowlada
Next articleSarifka lacagta doolarka oo hoos u dhacay